Ingabe i-Skype ku-Mac? - I-Skype
Main > I-Skype > I-Skype classic mac - izixazululo zokuthola
I-Skype classic mac - izixazululo zokuthola
Ingabe i-Skype ku-Mac?
NgeI-Skypeungashayela abangane nezihlobo ngekhompyutha yakho. Ukushaya ucingo kumahhala uma i-interlocutor yakho nayoI-Skypeesetshenzisiwe. Kulesi sihloko ungafunda ukuthi ungakwenza kanjaniI-Skypeokulandwayo nokufakwa kufayela le-IMac-ikhompyutha ngeIMacI-OS X Yosemite ivuliweIMacOSSaw.Jul 6 2017.
Endatshaneni yami edlule, ngikuxwayisa ngokuqothula i-Apple Silicon M1 MacBookPro, iMacBook Air, noma iMac mini.
Uma usula i-SSD yakho ngokuthembeka, lapho-ke ungayibuyisela iMacOS Big Sur ehlanzekile kuyo. Yilokho kanye okwenzeka kimi. Ngeshwa okwamanje kukhona i-bug ku-macOS noma i-firmware engakalungiswa.
Kepha ungakhathazeki, kunesixazululo esilula nesisheshayo sokuthi ungabuyisa kanjani i-Apple SiliconM1 Mac yakho Izinyembezi ezihlanzekile, ngizokukhombisa kule ndatshana, igxathu negxathu, ukuthi kwenziwa kanjani. Sawubona, nginguTeresa kusuka ku-morgonaut.cloud futhi nginikela ukwesekwa komuntu ngamunye kwe-Apple Mac, iWindows, iLinux neServer Yakha uma udinga usizo, vele ujoyine ubulungu be-mywebsite (isixhumanisi sikule ncazelo yendatshana) futhi ngizokusiza ungene phambi kwamehlo akho kukhompyutha yakho ngesikhathi socingo lwe-athikili naseseshini yesilawuli kude.
Qiniseka ukuthi ushaya inkinobho yokubhalisa ngezansi bese uqhafaza ngokulandelayo insimbi ukwenza lokhu bese ukhetha Zonke Izaziso ukuze ungaphuthelwa yimibhalo yami elandelayo. Ungakhathazeki ngempela, inqubo yonke empeleni ilula kakhulu futhi iqondile futhi ngizokukhombisa konke bukhoma isinyathelo ngesinyathelo. Yini oyidingayo.
Ngeshwa, udinga enye iMac 'enempilo'. Kungaba yi-Mac, Intel noma i-M1 ngempela, akunandaba. Lapho-ke okudingayo ikhebula le-USB-C kuya ku-USB-C.
Nonke kungenzeka ninayo ishaja yangempela ye-Apple eza nama-M1 MacBooks. Kulesi siboniso, ngizobe ngisebenzisa le ntambo ngqo. Into eyodwa ebalulekile.
Emshinini 'wezitini', udinga ukuwuxhuma ethekwini eliphambili, umane itheku eliseduze kwesikrini. Futhi manje xhuma ukuphela kwesibili kwekhebula ku-Mac yakho 'enempilo'. Ngakho-ke ngakwesokudla ngine-MacBook Pro M1 yezitini, engiyibuyisela ekuphileni ngakwesobunxele, kulokhu iMacBook Air M1.
iphutha le-xbox 0x82d40007
Manje landa uhlelo lwe-Apple Configurator 2 ku-Apple App Store. Isixhumanisi esiqondile engikulungiselele sona kule ncazelo yendatshana. Futhi uvule lolu hlelo lokusebenza.
Manje ake siyivale iMacBook eyakhiwe ngezitini futhi ngesikhathi sokuqala kufanele ulandele le nqubo yokuchofoza ukhiye ngqo. Lalelisisa! Cindezela inkinobho yokuqala bese uyibamba icindezelwe. Ngemuva komzuzwana, cindezela u-Ctrl ongakwesobunxele nezinkinobho ze-Option bese ucindezela ukhiye weShift ongakwesokudla ngasohlangothini lwesokudla ngasikhathi sinye.
Ngakho-ke bamba zonke lezi zinkinobho ndawonye imizuzwana engaba yishumi, bese udedela zonke izinkinobho, kodwa qhubeka ucindezele inkinobho yamandla uze ubone unxande we-DFU kusibonisi esinempilo seMacBook. KULUNGILE, kanye futhi. Cindezela bese ubamba inkinobho yokuqala.
Ngemuva komzuzwana, cindezela u-Ctrl ongakwesokunxele, u-Option ongakwesokunxele, nezinkinobho ze-Shift ezingakwesokudla. Bamba phansi zonke lezi zinkinobho ndawonye cishe imizuzwana eyi-10, bese udedela zonke izinkinobho kodwa qhubeka ucindezele inkinobho yamandla uze ubone unxande we-DFU ku-MacBook enempilo. Halala, ingxenye enzima kakhulu yenziwe.
Manje chofoza noma yikuphi kunxande we-DFU bese ukhetha kuwo Izenzo bese ubuyisela kumenyu ephezulu. Manje isifaki ne-firmware yakamuva ye-MacOS izolandwa futhi idluliselwe ngokuzenzakalela kwi-MacBook Pro M1 yezitini. Isikhathi, kimi kwathatha cishe imizuzu eyi-15.
Uma konke lokhu sekwenziwe, i-MacBook yakho yezitini izoqala kabusha ngokuzenzakalela futhi uzokwaziswa ngesikrini se-splash esifanayo osibonayo kuwo wonke amadivayisi we-Apple lapho uqala. Manje senze inqubo efanayo naleyo eyenziwe yi-Apple Ilungiselela ama-Macs amasha okuthunyelwa kukhasimende. Siyakuhalalisela, manje usulungise i-Apple Silicon M1 Mac yakho eyakhiwe ngezitini.
Manje usungayisetha le MacBook kusukela ekuqaleni, kepha futhi ungayibuyisa kusuka kusipele seTime Machine noma wenze konke ngqo kusuka kwenye iMac. Ngizihlole ngokwami ​​zonke lezi zindlela futhi zonke zasebenza ngaphandle kwenkinga. Ngakho-ke, njengoba ngathembisa ekuqaleni, akuyona enye inkolo, kepha kulula kakhulu.
Eqinisweni, bengilokhu ngisebenzisa le ndlela ukusebenzisa yonke imishini yami emisha kusukela lapho. Lolu hlelo lokusebenza lwe-Apple Configurator lusizo kakhulu, ungalusebenzisela amanye amacala amaningi wokusebenzisa, kufaka phakathi amadivayisi we-iOS, ngakho-ke ngincoma ukuthi ngifunde imibhalo futhi ngiyijabulele. Ngikuphathele i-Apple Configurator 2 Umhlahlandlela Womsebenzisi osemthethweni 'wekhasi le-Apple Support elixhunywe kule ncazelo yendatshana.
Ngiyethemba ngenze usuku lwakho lwaba ngcono futhi, uma kunjalo ngicela ushaye inkinobho yokuthanda engezansi. Ungakhohlwa ukubhalisa, chofoza insimbi eceleni kwaso bese ukhetha Zonke Izaziso ukuze ungaphuthelwa yimibhalo yami yesikhathi esizayo. Futhi chofoza inkinobho yokwabelana bese wabelana ngale ndatshana nabangani bakho ukuze isize abantu abaningi kakhulu.
IMorgonaut ihlale ikhona ngawe :) Futhi-ke ungakhohlwa ukuhlola ezinye izindatshana zami. Ngakho-ke okwanamuhla, ngiyabonga ngokubuka futhi sibonane ngokuzayo, bangane bami.
Ingabe uhlelo lokusebenza lwe-Skype lumahhala?
I-Skype-ku-I-Skypeizingxoxo zisemhlabeni wonkemahhala. UngakwaziI-Skypesebenzisa kukhompyutha, iselula noma ithebhulethi *. Abasebenzisi kufanele bakhokhele kuphela izici ze-premium ezifana nemiyalezo yezwi, imiyalezo noma izingcingo kulayini wasendlini, iselula noma ngaphandleI-Skype.
Kulesi sihloko ngizokukhombisa ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-Skype ku-Android.
Ngizokukhombisa ukufakwa kuqala. Ngemuva kwalokho sakha i-akhawunti entsha bese sihlola zonke izilungiselelo esingazisebenzisa. Ngemuva kwalokho sizobona ukuthi singabiza kanjani umuntu bese sabelana naye ngesikrini, futhi sizobona nokuthi singaqala kanjani ucingo lwenkomfa.
Ukufaka i-Skype ku-Android udinga ukuthola i-Google Play, thepha ku-Google Play ubheke uhlobo lwe-skype tap install bese ulinda. Ngemuva kokuthi ukufakwa kuqediwe, vele uthephe okuthi Vula. Ngemuva kokufaka uhlelo lokusebenza, nakhu okudingeka ukwenze ukudala i-akhawunti.
Manje thepha ku-Masihambe. Thepha Ukungena ngemvume noma Dala. Lapha sichofoza ku-Yakha.
Uma usunayo i-akhawunti ne-Microsoft, ungayisebenzisela ukungena ngemvume, usebenzisa inombolo yakho yocingo noma ikheli le-imeyili. Kule demo, ngisebenzisa i-imeyili ngakho-ke ngizothepha Sebenzisa i-imeyili yakho esikhundleni salokho. Bhala i-imeyili Manje thepha OkulandelayoDala Iphasiwedi Entsha Manje thepha Okulandelayo.
Faka igama lakho nesibongo. Thepha Okulandelayo, thola ikhodi kusuka kuhlelo lwakho lokusebenza lwe-imeyili. Ukuqinisekisa i-imeyili, ake siye kuhlelo lokusebenza lwe-Gmail ukuthola le khodi, nayi.
Ake sibuyele emuva kuhlelo lokusebenza lwe-Skype ukuyibhala. Thepha Okulandelayo. Bhala ikhodi ye-CAPTCHA.
Thepha Okulandelayo. Manje khetha usuku lokuzalwa. Manje khetha izwe.
Thepha Okulandelayo. Qinisekisa iminyaka yakho ngokuthepha Okulandelayo. Ungathola kalula oxhumana nabo lapha.
Ungathepha Vumela noma uphike ngendlela othanda ngayo. Thepha Okulandelayo. Ngizothepha Vumela futhi, thepha Okulandelayo, bese ushaya u-Vumela ukuvumela yonke ingxoxo kusuka kulesi sinyathelo.
Manje i-Skype yakho ixhunywe kwi-akhawunti entsha efonini yakho ye-Android. Ake sibone isethulo esifushane sohlelo lokusebenza phezulu ngakwesokunxele, inkinobho yesaziso. Ngakho thepha kuso uma unezaziso ezintsha.
Ngakwesokudla phezulu unezinketho ezithile zokuhlela zohlu ozoba nazo nezingxoxo. Futhi, ngezansi unezinkinobho ezilandelayo, uxoxe, ushayele ucingo, oxhumana naye nenkinobho yengxoxo entsha. Ungahlola amasethingi bese usetha isimo noma isithombe ngokucindezela engxenyeni engenhla lapho kutholakala khona iphrofayili yakho.
Ake sithinte kuso. Lapha ungasetha isimo sakho samanje. Ungasebenza, ube matasa, ungekho noma ungabonakali.
Uma ungabonakali, ngeke babone ukuthi uxhumeke ku-Skype. Ngemuva kwalokho isimo. Masishintshe isimo sethu.
Futhi, lapha unenketho yephrofayili ye-Skype, lapha lapho ungashintsha khona igama lakho, isithombe, wabelane ngephrofayili yakho bese usetha izinketho zobumfihlo, ngezinye izindlela 'zokukuthola' lapho unamandla okuthi uma othile isesha igama lakho, awudingi ukusesha. Nansi le nketho. Ungangeza nenombolo yeselula lapha uma ufuna.
Manje futhi unezinketho eziningi kuzilungiselelo. I-akhawunti nephrofayili kucishe kube yizinketho ezifanayo nephrofayili ye-skype ebesivele siyifuna Ngokuvamile, unenketho yokushintsha ulimi lohlelo lokusebenza. Uma kubonakala ungakhetha itimu ye-Skype yakho nombala oyinhloko.
Ungadlala ngayo futhi usethe noma ngabe ufuna. Kuzilungiselelo zekholi, unezinto ezithile ezithokozisayo njenge-ID Yomshayeli. Ungasetha umuntu ukuthi athole ikholi evela ku-Skype ukuze ibukeke sengathi ivela enombolweni yakho yocingo.
Ungavumela futhi le divayisi ukuthi ikhale amakholi kuphela koxhumana nabo abacasulwe umuntu ongamazi. Ungavumela futhi inketho yemibhalo engezansi yocingo. Lokhu kuhle kakhulu kubantu abangezwa kahle.
Ngemiyalezo, unezinketho ezikhethekile zemiyalezo, akukho okhethekile, kepha lokhu kuyasiza. Ngezaziso, ungakhetha ukuthi yisiphi isaziso se-push ofuna ukusithola. ISkype iyaphana futhi ikuvumela ukuthi ukhethe ngqo lokho ofuna ukukuthola.
Kuhle lokho. Futhi, uma uthepha ingxoxo, ungavala isaziso isikhathi esithile noma unomphela. Manje inketho yokugcina Oxhumana nabo.
Yilapho ungavumelanisa khona Oxhumana nabo befoni yakho ne-Skype Uma ungakakwenzi, manje une-Skype efakwe ocingweni lwakho. I-Skype uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokuxhumana nabangane kanye nozakwethu. Ukwengeza oxhumana naye ku-Skype, udinga ukwenza okulandelayo.
landa kabusha i-microsoft word
Thepha inkinobho yokuxhumana ezansi. Ngezansi, thepha isithonjana ngephrofayili nangokuhlanganisa. Lapho usesha, uzodinga ukufaka igama lomsebenzisi le-akhawunti ofuna ukuyengeza.
Faka igama lalowo muntu. Masithole ingxenye yegama lomsebenzisi, manje ungabona ukuthi i-Skype ithole ama-akhawunti amaningi anegama elifanayo. Ngakho-ke uma ufaka oxhumana naye hlola igama lomsebenzisi lomuntu futhi kuhle nokuhlola isithombe uma kunabantu abaningi abanegama elifanayo, indlela engcono kakhulu yokukhetha ukuthi ungubani oxhumana naye ukubuka isithombe.
Manje thepha ku-Engeza umuntu ofuna ukumengeza njengoxhumana naye. Umuntu omfakile njengoxhumana naye udinga ukuqinisekisa ukuthi uyakwazi wena. Ngakho-ke linda omunye umuntu aphendule.
Uma ufuna ukubiza umuntu ku-Skype, sicela ulandele lezi zinyathelo, okokuqala endaweni yengxoxo, uma usuvele ukhulumile naloyo muntu, ungaqala kalula ucingo, uma ungamtholi lowo muntu kuleyo ndawo, thepha oxhumana nabo bese uthola umuntu lapho, thepha umuntu ofuna ukumshayela. Manje unezinkinobho ezimbili ngaphezulu: isithonjana se-athikili nesithonjana socingo. Uma ufuna ukuqala ucingo lwe-athikili, mane uthephe isithonjana se-athikili.
Uma ufuna ukuqala ikholi yomsindo, vele umise isithonjana sefoni. Ngakho-ke ake uthephe ucingo lwe-athikili. Manje ucingo luyaqhubeka futhi silinde omunye umuntu ukuthi aphendule ucingo.
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi ngabe umuntu uphendule ucingo, ungavula noma ucishe i-athikili noma umsindo nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi socingo kuleli windi. Unezinkinobho ezintathu, imakrofoni, i-athikili nocingo lokuqeda. Kunamachashazi amathathu ezansi kwaleli windi.
Thepha kuso. Lapha uzobona ezinye izinketho ezifana nalezi: Vumela ividiyo engenayo, Nika amandla imibhalo engezansi, engeza abantu, qopha ukuqopha, nesikrini sokuhlukanisa zama ukubhala lokho okushiwo ngumuntu. Lokhu kuyindlela enhle kakhulu kulabo abangezwa kahle.
Uma futhi ufuna ukugcina ikhophi yengxoxo nomuntu, ungacindezela i-Start Recording. Sicela nikhumbule ukuthi nobabili nizokuthola okuqoshiwe, ngakho-ke yazisa omunye umuntu ukuthi uqopha umhlangano. Futhi ungabelana ngesikrini sakho nabo uma ufuna ukubakhombisa okuthile okuvela efonini yakho, lezi yizona zindlela ongakhetha kuzo ngocingo.
Uma ufuna ukudala ucingo lwenkomfa ku-Skype, sicela ulandele lezi zinyathelo. Unezinketho ezimbili zokuqala ucingo lwenkomfa. Ake sibone ukuthi yini okufanele uyenze uma usuvele usocingweni nomunye futhi ufuna ukwengeza omunye umuntu ocingweni.
Ngakho-ke ngizovele ngiqale ucingo nomuntu othile. Ngithinta igama lomuntu. Thepha inkinobho Call.
Ngakho-ke ikholi isiqalile. Manje thepha amachashazi amathathu ngezansi kwesokudla. Kule menyu, thepha okuthi Engeza Abantu.
Khetha umuntu ofuna ukumfaka engqungqutheleni ohlwini. Kungaba ngaphezu komuntu oyedwa. Uma unohlu olukhulu, ungavele useshe oxhumana naye.
Thepha lowo muntu ukuze ubone ukuthi ufuna ukungezwa yini ocingweni lwengqungquthela. Uma ungeze omunye umuntu ngephutha, ungavele umsuse ngaphambi kokumshayela. Thepha inkinobho X eduze kwesithombe sephrofayela.
Uma usungeze umuntu omfunayo, thepha okuthi Engeza. Manje umuntu uyabizwa futhi ngemuva kokuba esamukele, uqala ucingo lwenkomfa. Enye indlela yokuqala ucingo lwenkomfa ukudala iqembu lale ngqungquthela Thepha le nkinobho kusuka ezansi Manje thepha engxoxweni yeqembu entsha Kuleli qembu bhala igama lengqungquthela oyifunayo.
Ngemuva kwalokho, khetha umuntu ofuna ukumengeza eqenjini. Ngemuva kokwenza lokho, vele uthephe ku-Kwenziwe. Kuleli qembu elisha, mane uthephe ucingo oluvela phezulu futhi uzoqala ingqungquthela yakho entsha njengocingo lwenkomfa olulula, unezinketho ezifanayo zokwengeza abantu abaningi, wabelane ngesikrini bese urekhoda umhlangano.
Lokhu kuyasiza kakhulu. Ukuze uqale isikrini sokwabelana, udinga ukushayela umuntu othile. Masibize othile ohlwini lwami.
Thepha igama lalowo muntu bese uthepha inkinobho yocingo phezulu, manje ucingo seluqalile ukuthepha amachashazi ama-3 ngezansi kwesokunxele, uzobona inketho yokwabelana kwesikrini lapha, chofoza ekwabiweni kwesikrini, manje uzothola isaziso mayelana ukudalulwa kolwazi oluyimfihlo, lolu lwazi lungahluka ngokuya ngohlobo lwe-Android nohlobo lwefoni yakho. Uma uqinisekile ukuthi ukwabelana ngesikrini kuyaqala, thepha okuthi Qala Manje. Manje ukwabelana kwesikrini kuzoqala.
Ake sibone ukuthi lokhu kubukeka kanjani esikrinini somunye umuntu. Nayi enye i-akhawunti exhunywe engqungqutheleni izobona ukuthi lowo muntu angabona isikrini sakho samanje. Zonke izaziso nayo yonke idatha kuyabonakala kulo muntu.
Kukhona ukubambezeleka okuncane ekwabelaneni ngesikrini, kepha lokhu kujwayelekile. Bheka ukuthi iziphatha kanjani ukumisa ukwabelana kwesikrini, vele ubuyele emuva kuhlelo lokusebenza lwe-Skype. Uzoba nenkinobho phezulu ukumisa isikrini.
Thepha lokho bese ukwabelana kwesikrini kufanele kume. Uma lokhu bekuwusizo sicela wabelane futhi ubhalise
Ngingayifaka kanjani kabusha i-Skype?
Cindezela okhiye beWindows ne-R kukhibhodi ngasikhathi sinye.
Ebhokisini lengxoxo ye-Run, thayipha i-appwiz.
I-Skypeetholakala ohlwini, chofoza kwesokudla bese ukhetha susa noma susa.
Landa bese ufaka inguqulo yakamuva ye-I-Skype.
Ekhasini lezilungiselelo, chofoza 'Izinhlelo Zokusebenza'.
Manje khetha u-'Qala 'ezansi kwebha eseceleni yangakwesobunxele. Thola i-Skype kusuka kuhlu lwezinhlelo zokusebenza ezifakiwe. Vele uguqule iswishi uye 'ukuvala' ukuvimbela i-Skype ukuqala ekuqaleni.
Kungumqondo omuhle ukugcina noma yiziphi ezinye izinhlelo zokusebenza ongazisebenzisi kusukela ekuqaliseni okuzenzakalelayo Naku ukuphela kwalesi sifundo, sicela uthande i-athikili uma ukuthole kuwusizo futhi ubhalisele ku-Foxy Tech Tips ukuthola amanye amathiphu namasu e-Skype